တောက်ပကြည်လင်တဲ့ မျက်ဝန်းအလှအတွက်... | OnDoctor
By Dr. Kaung Htet Naing	 On Apr 18, 2019 Last updated Feb 10, 2020
Eye shadow မကူ Eyeliner မကူပဲ လှပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ ရရှိဖို့…
“ဟယ်.. နင်အိပ်ရေးတွေအရမ်းပျက်တာလား? ပန်ဒါမျက်လုံးဖြစ်နေပြီ”..
“ငါအရမ်းစိတ်ညစ်တာပဲ မိတ်ကပ်ဘယ်လောက်လိမ်းလိမ်း မျက်တွင်းကျပြီး ညိုနေတာကဖုံးမရဘူးဟယ်”…
“ငါ့မျက်လုံးအောက်ကလေ Concealer အကောင်းစားသုံးတာတောင် ဒီလိုပဲ ဖောင်းအစ်ပြီး သွေးကြောတွေ မြင်နေရတာဟ.. မိတ်ကပ်မပါဘဲ အပြင် မသွားရဲသလောက်ဘဲဟယ်”…
ဒီလိုမျိုးတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်က အမျိုးသမီးတွေ မကြာခဏပြောတာ ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျက်ဝန်းအရေပြားဟာ တခြားမျက်နှာ အရေပြားနဲ့တောင် မတူပါဘူး။ အင်မတန်နုနယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရေးအကြောင်း၊ မျက်အိတ်တွဲတာ၊ မျက်ကွင်းညိုတာတွေက အရမ်းအဖြစ်များသလို ထိန်းသိမ်းရလည်းခက်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မျက်ကွင်းညိုခြင်း အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။
၁ – စိမ်းဝါရောင်သန်းသော မျက်ကွင်းညိုခြင်း
၂ – အညိုရောင်သန်းသော မျက်ကွင်းညိုခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
> နံပါတ်တစ် အမျိုးအစားကတော့ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းလို့ပါ။ ကျွန်မတို့ မျက်ဝန်းတဝိုက်မှာ မျက်နှာပြင်ကလို ကြွက်သားမရှိဘဲ အရေပြားလေးပဲ ရှိပါတယ်။ သွေးလည်ပါတ်မှု မကောင်းတဲ့အခါ သွေးပြန်ကြော( veins) တွေ ဖောင်းလာပြီး အရေပြားပေါ်က မြင်နေရတာပါ။ အဲဒီအခါ စိမ်းဝါရောင်ဖက် သန်းတဲ့ မျက်ကွင်းညိုခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အဓိကကတော့ အငန်များတဲ့ အစားအစာ၊ အသင့်စားအစားအစာတွေ အပြင်စာတွေ အစားများတဲ့သူတွေမှာ ဒီလို အဖြစ်များပါတယ်။
> နံပါတ်နှစ် အမျိုးအစားကတော့ မျက်လုံးအရမ်းပွတ်တဲ့သူတွေ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ အရမ်းကြည့်တဲ့သူတွေ အိပ်ရေးမဝတဲ့သူတွေ မှာတွေ့ရပါတယ်။ မျက်လုံးအရမ်းပွတ်တဲ့အခါ သွေးနီဥလေးတွေ ပမာဏ အနည်းငယ် ပေါက်သွားပြီး သွေးနီဥထဲက ဘီလီရူဘင်လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြယ်တစ်မျိုးထွက်လာပြီး အညိုရောင်သန်းသော မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ အမျိုးသမီးအများစုမှာ နှစ်မျိုးရောနေတာများပါတယ်ရှင်။ ကဲ… ခုတော့မျက်ကွင်းညိုခြင်း ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာ သိသွားပြီဆိုတော့ မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမလဲ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့ ???
၁) ပထမဆုံး ရေဓာတ် အဆီဓာတ် ဖြည့်ပါ။
>> မျက်ဝန်းတဝိုက်က အရေပြားဟာ အင်မတန်နုနယ် ပါးလွှာပါတယ်။ တခြားမျက်နှာ အစိတ်အပိုင်းတွေထက် သူကအဆီဓာတ်ရေဓာတ် ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ အများစုက မျက်ကွင်းညိုရင် အသားဖြူဆေး၊ အသားဖြူခရင်မ်တွေပဲ လိမ်းရမယ်လို့ ထင်နေတာ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆပါ။ မျက်ဝန်းတဝိုက် အရေပြားအစိုဓာတ် ပြည့်ဝနေမှ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမှာပါ။
အဲ့တော့ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ရေဓာတ် အဆီဓာတ်ဖြည့်ဖို့ပါ။ မျက်လုံးတဝိုက် အရေပြားအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းပစ္စည်းတွေ (eye cream) ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။
အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘူး အပို မကုန်ချင်ဘူးဆိုရင် သံလွင်ဆီ၊ အုန်းဆီ၊ ကလေးတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ဆီ (Baby oil)၊ vaseline gel စတာတွေကို မိမိပုံမှန်လိမ်းနေကျ ခရင်မ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ဆတူရောပြီး (သို့ ) သူတို့ကိုပဲသီးသန့် မျက်လုံးတဝိုက်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
လိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း လက်သူကြွယ်ကို သာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ပွတ်ဆွဲတဲ့ ပုံစံမဟုတ်ဘဲ နှာခေါင်းဘေးနားက မျက်လုံး အရေပြားကစလို့ အတွင်းမှ အပြင်ဖက်ကို တစ်ချက်ချင်းစီ လက်သူကြွယ်လေးနဲ့ ဖိဖိပြီး လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိဖိပြီးလိမ်းပေးခြင်း အားဖြင့် မျက်ဝန်းကို နှိပ်နယ်ပေးရာ ရောက်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။ လက်သူကြွယ်ကို သုံးရတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ နုနယ်တဲ့ အရေပြားပေါ်ကို ဖိအားအများကြီး မသက်ရောက်အောင်ပါ။ တခြားလက်ချောင်းလေးတွေထက် စာရင် လက်သူကြွယ်က အားပိုပျော့ပါတယ်။
၂) သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကုကြမယ်။
>> တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်လောက် အာလူးပါးပါးလေးလှီးပြီး မျက်လုံးအောက်ကို ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံး အရမ်းညောင်းတဲ့နေ့မျိုးမှာ သခွားသီးကပ်ပေးတာ၊ နောက် တိုနာလိမ်းတဲ့ ဝါဂွမ်းမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ် ( သို့ ) နှင်းဆီပန်းရည် (rose water) ကိုရွှဲနေအောင် ထည့်ပြီး မျက်လုံးပေါ် ၁၀ မိနစ်ခန့် အုပ်ထားပေးခြင်းဖြင့် ပင်ပန်းနေသော မျက်ဝန်းကို အုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရေနွေးစိမ်သောက်ပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်လေးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီး မျက်လုံးပေါ် အုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်းကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၃) နေ့စဉ်သွားလာနေထိုင်မှု ပုံစံလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
>> ခုခေတ်က ဖုန်းတွေ TV တွေ အရမ်းကြည့်ကြတော့ နာရီဝက်တစ်ခါလောက် ဝေးတဲ့နေရာ၊ သစ်ရွက်စိမ်းစိမ်းရှိတဲ့ နေရာကို စက္ကန့် ၂၀ ခန့် ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ မျက်ခုံးရိုးလေးကို နှိပ်ပေးပါ။
– နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ မကြာခဏ မျက်လုံးပွတ်တာမျိုး၊ အိပ်ရေးခဏခဏ ပျက်တာမျိုး တနေကုန် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ TV ကြည့်တာမျိုးကို ရှောင်ပေးပါနော်။
ကဲအားလုံးပဲ ပန်ဒါမျက်ဝန်းလေးတွေမှ ကင်းဝေးကြပါစေနော်။
Scarlette (ဆေး ၁)
မျက်နှာလေးအညစ်ကြေးကင်းစင်ပြီး ဝင်းပကြည်လင်နေအောင် …